Tababare Kharashka Android u wuxuuu Your Money
Haddii aad heshay badan oo biilasha bixisid iyo ma waxaad kala socon kartaa hal macaamil ganacsi lacageed oo kasta, waxaa had iyo jeer waa ka wanaagsan in Rabbiga laysku halleeyo qaar ka mid ah qalab ka shaqeeya doonaa yaabab run ah adiga iyo kaa caawiyaan in aad xalliso waqti. Android Tababaraha kharashka Apps waa inuu awoodo inuu bixiyo fursad ay si wanaagsan u maareeyaan dhaqaalaha, tan iyo markii ay la socdaan dakhliga iyo kharashyada, si faahfaahsan ugu yar hayn doonaa.
Qeybta 1: Best 5 Kharashka Android Manager Apps Qeybta 2: Wondershare MobileGo for Android in Maamul Android Apps Manager Kharashka
Qeybta 1: Best 5 Android Apps Manager Kharashka
Ledgerist 4.4 / 5 Lacag
Depoza-Kharashka Tracker 4.4 / 5 Free
Financius Kharashka-Manager 4.4 / 5 Free
Tababare Kharashka 4.3 / 5 Free
Miisaaniyadda 4.1 / 5 Free
Bilow off la app tababarihii kharashka ugu sarreeya Android, Ledgerist. Tani app quruxsan nidaamsan ayaa dareenka dadweynaha xaq maalintii ugu horraysay ee la bilaabay. Waa fudud oo sahlan in ay la isticmaalo oo weli aad bixisaa ogaaaday ah muuqaalada qabow in xisabadka cad marnaba samayn karin.
Waxaa ka mid ah qaababka ugu fiican in aynu ku soo gaarto in Ledgerist, waxaa hubaal waa ikhtiyaarka macaamilada celin yareeyo aad dadaal in hawlaha lagu qoray. Intaa waxaa dheer, waa lacag la'aan xayeysiis. Oo waa inaad aad qaado yeelan karaan ka lacagaha kala duwan oo taasi dhab ma wax tixgalin mudan, gaar ahaan haddii aad shaqo dhigaya in. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa habayn gaar ah oo sidaas loo xoojiyo ammaanka guud ee app. Ugu dambeyntii, waxa aad awoodi kartaa in ay gurmad iyo soo celin haddii xaalad kasta oo dhacdooyin discomforting muddo ka. Si kastaba ha ahaatee, ma aha app lacag la'aan ah oo aad leedahay si aad u iibsato at € 1,59.
Tracker 2. Depoza-Kharashka
The labaad sare Android app Tababaraha kharashka waa Depoza-Kharashka Tracker. Marka ay timaado kharashyada shakhsiga ah, oo waxba ma jiraan sida anfacaya iyo kutub sida Depoza in ay ka faa'iideystaan. Waxaad ku qori kartaa wax kasta, si aanay illoobin iyo in aan la iska eafiya iskana kharash kasta.
Macna ma laha inta yar yar lacagta ah ayaa, waxaa loo xisaabin karaa oo sidaas ku daray in ay aad u dheeli guud ee maalintii, toddobaadkii ama bisha. Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Depoza waa xaqiiqda ah in macluumaadkaaga la dhoofin karo WordPress iyo tan aad ka bixin karto dabacsanaan fiican in aad kaydinta iyo helitaanka xogta. Intaa waxaa dheer, lacagta iyo macaamil maaliyeed qaybsan yihiin qaybaha nidaamsan oo wax ku ool ah. Sida Ledgerist, ma jiraan wax ad ku Depoza, iyadoo gunno ah in la siiyaa dhammaan dadka isticmaala Android lacag la'aan ah.
Faa'iidada kale rajo leh waa in aad ku soo kordhay oo ah lacagta aad ka heli kartaa in debit iyo credit cards (hadda Raiffeisenbank, Sperbank, Citybank iyo koraya) SMS si app. Khasaare oo kaliya waa in aysan ka mid ah wax kasta oo ikhtiyaarka sirta ah iyo dabcan interface la bartey hormarin karo.
Download Tracker Depoza-Kharashka ka Google Play Store >>
Tababare 3. Financius-Kharashka
Next liiska tababaraha kharashka ugu sarreeya Android users waa maamulaha Financius-Kharashka. Tani waa tusaale kale oo app si xor ah oo aan ka mid ah ad wax. Waxaad ka faa'iidaysan karaan lacagaha kala duwan oo awood u fiican in ay la tacaalaan xisaab badan waqti isku mid ah lacagaha iyo kafado kala duwan. Waxaad bilaabi kartaa iyadoo qaybaha default ama abuuro qaybaha kuu gaar ah.
Muuqaal kale oo gaar ah oo Financius waa in ay jiri doonaan warbixin guud ka dib waqtiga u gaar ah oo aad shakhsiyeeyo karo muddo waqti. Waxaa jira Google Drive ka dib iyo tan weli gunno kale oo cajiib ah ee isticmaala Android. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah farriimaha dheeraad ah oo ku saabsan digniin bixinta waa in ay ahaataa in ka badan soo dhawaynayaa.
Download Manager Financius-Kharashka ka Google Play Store >>
Tababare 4. Kharashka
Tababare Kharashka waa app Tababaraha kharashka kale hogaanka Android ee dhammaan dadka isticmaala. App Tani lacag la'aan ah ayaa ad lahayn iyo sidoo kale. Waxaad xor u Yimid halaagganagu helay, tan iyo markii aad guraan kartaa kharashka aad maalin walba, toddobaad walba ama bil. App waxay leedahay xal u raad raac ah iyo soo celinta xogta aad mar kasta oo ay lagama maarmaan tahay.
Haddii aad ku jirto miisaaniyad ama aad si fudud u baahan tahay in la xadido kharashka sabab qaar ka mid ah, waxaad samayn kartaa in quruxsan si fudud iyadoo la isticmaalayo Manager Kharashka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadinayso muuqaalada dheeraad ah oo casri ah, laga yaabee in aad waa in ay eegaan meel kale. Waxaa jira wax aan ganacsi oo sahli kara jidka aad u soo gudbaan inta lagu jiro talooyin ah ee kharashka soo noqnoqonaya. Calculator No waxaa laga heli karaa isticmaalayaasha, midkood.
Download Manager Kharashka ka Google Play Store >>
Kharashka app tababaraha ugu danbeysay ee hogaanka u Android waa Miisaaniyadda. Tani waa app kale oo lacag la'aan ah waxaad ka heli kartaa oo ku saabsan Google Play App Store. Muuqaalka wanaagsan oo aad ka heli karto ka mid ah Miisaaniyadda waa isticmaalka macaamilada soo noqnoqda. Tani waxay aad u badbaadin karaa wax weyn oo waqti iyo dadaal mustaqbalka fog, ma u baahan tahay halka aad walwalo halmaamay si loo xisaabiyo mid ka mid ah kharashka. Iyada oo miisaaniyada, waxa aad maamuli kartaa in ka badan hal xisaab. Waxaa intaa dheer, waxaad ka heli xogta soo dejinta iyo dhoofinta ee file .csv ah labadaba. Sidaas oo ay tahayna, sida khasaaraha waxaan u leeyihiin in ay tilmaan la'aanta ah ee ah qeybaha in kharashka iyo baahida loo qabo in dhigay sirta u gaarka ah.
Download Miisaaniyadda ka Google Play Store >>
Qeybta 2: Wondershare MobileGo for Android in Maamul Android Apps Manager Kharashka
Waa habka app rakibo ka adag ka dhigi doonaa haddii aad ka soo dejisan app ee Android Tababaraha kharashka kombiyuutarka. Waxaad ku rakiban kartaa oo la furo Wondershare MobileGo for Android kombiyuutarka iyo rakibi Tababaraha Kharashka u barnaamijyadooda Android ka Google Play App Store si toos ah.
Download, rakib, uninstall, dhoofinta Android Kharashka Manager Apps
Tallaabada 1. rakibnay Wondershare MobileGo for Android kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Isku qalabka Android aad la cable USB ama WiFi si aad u computer.
Tallaabada 3. Open Wondershare MobileGo for Android iyo dooran Google Play
Tallaabada 4. Search Tracker Depoza-Kharashka, Miisaaniyadda, iyo wax kasta oo Chine kale Tababaraha kharashka Android oo guji rakib si toos ah iyaga rakibi ah ee aad taleefan Android ama kiniin.
Tallaabada 5. In column bidix ee Wondershare MobileGo for Android, guji Apps in brinig ilaa uu furmo suuqa maamulka app on xaq. Markaas, waxa aad maamuli kartaa maamulaha expsense ee Chine Android adigoo gujinaya rakib , uninstall , dhoofinta , dhaqaaq card SD , iwm
> Resource > Android > Best 5 Manager Kharashka Android u wuxuuu Your Money